राष्ट्रपति भण्डारीको संरक्षण पाएका जोगी माथी बलात्कारकाे आरोप ! प्रहरीले जाहेरी लिएन::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
राष्ट्रपति भण्डारीको संरक्षण पाएका जोगी माथी बलात्कारकाे आरोप ! प्रहरीले जाहेरी लिएन
काठमाडौं– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको संरक्षण पाएका सिद्धबाबा भनिने कृष्णदास गिरीमाथि बलात्कारको आरोप लागेको छ । नसरीको चतरास्थित आश्रममा बस्ने गिरीले । आफ्नै अनुयायी महिलामाथि गत ४ कात्तिकमा बलात्कार गरेको पीडितको भनाइ छ। आफूलाई भेट्न बोलाएर चतरास्थित आश्रममै बलात्कार गरेको पीडित महिलाले दिएको जाहेरीमा उल्लेख छ। तर, प्रहरीले अझै जाहेरी दर्ता गरेको छैन।
सिद्धबाबाकै प्रभावमा परेर प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगरेको पीडितको भनाइ छ। स्रोतका अनुसार पीडित महिला केही दिनअघि महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं पुगेकी थिइन् । सुनसरीको घटना भन्दै काठमाडौं प्रहरीले उजुरी नलिएपछि उनीहरू केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) गएका थिए । सिआइबीले पीडित महिलाको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर जाहेरी सुनसरी पठाएको हो । मंगलबार नै सिआइबीले सुनसरीमा जाहेरी पठाए पनि सुनसरी प्रहरीले अनुसन्धानमा चासो नदिएको हो ।
बलात्कारको आरोप लागेका गिरी पोखराको रामघाटमा रहेको नरनारायण बाबा आश्रममा नौ दिने भूसमाधिमा बसेर विवादमा तानिएका थिए । पोखरामा भुसमाधि बसेको एकवर्षपछि सुनसरीको चतराधाममा पनि उनले यस्तै हर्कत गरेका थिए । सन् २०१७ मा चतरामा भूसमाधिमा बसेका उनी निस्कने दिन राष्ट«पति विद्यादेवी भण्डारी समेत पुगेकी थिइन् । राष्ट्रपति भण्डारी इटहरीबाट बराहक्षेत्र हेलिकप्टरमा पुगेकी थिइन् ।
त्यती मात्रै होइन, बराहक्षेत्रमा दुई जोगीबी जुँगाको लडाइ समेत छ । गिरीलाई भण्डारीले साथ दिएकी छन् भने अर्का जोगी जगतगुरु बालसन्तलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साथ दिएका छन् । गत बर्ष उनीहरुले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाईलाई बोलाएर दुई महिनामै दुई महायज्ञ चलाएका थिए ।
कृष्णदासजी महाराज’ ले राष्ट्रपतिलाई बोलाएर ‘तारमब्रह्म महायज्ञ’ आयोजना गरेको दुई महिना नबित्दै जगतगुरु बालसन्तको अगुवाइमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रमुख आतिथ्यमा ‘पिण्डेश्वर अर्धमहाकुम्भ मेला’को आयोजना गरेका थिए । आपसमा राम्रोसँग बोलचाल नभएका कृष्णदासजी र बालसन्तवीचको शक्ति–संघर्षलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साथ दिदै आएका छन् ।